Janaayo 2016 | RayHaber | raillynews
Bilaha: Janaayo 2016
Shirkadda Shirkadda Talip ee loo yaqaan 'Ihlar Valley Cable' iyo 'Project Lift'
Shirkadda Kazakhstan Talip ilaa Ihlara Valley Cable Car iyo Mount Mashruuca: Shirkad ka socota Kazakhstan waxay qorsheyneysaa inay ka dhisto nidaamka wiishka iyo fiilada korantada ee degmada Ihlara ee Degmadda Guzelyurt ee Aksaray. [More ...]
Gaadiidku wuxuu ka bilowday Istanbul
Gaadiidka oo kordhay ayaa ka bilaabmay Istanbul: Kadib kororka gaadiidka dadweynaha ee Istanbul, kororka qiimaha ayaa bilowday. Marka la eego jadwalka maanta laga bilaabo maanta, tikidhka buuxa ee Istanbul wuxuu ahaa 2,30 TL, arday 1,15 TL iyo qiimeeyay 1,65 TL. [More ...]
Soo jiidashada IZBAN ee Torbalı
Farxadda IZBAN ee Torbali: Duqa magaalada Torbali Adnan Yasar Gormez, Aliaga iyo Torbali 6 inta u dhaxaysa bisha Febraayo duulimaadyada IZBAN waxay kordhin doonaan qiimaha astaanta degmada, ayuu yidhi. Torbali oo ku socota Izmir iyada oo la bilaabayo khadka tareenka xawaaraha sare [More ...]
Maanta taariikhda: 31 January 1927 Ankara Station Hotel Taariikhda
Maalgashiga gaadiid ee Istanbul waxay dhaafi doontaa 90 bilyan ginni. [More ...]
Taageerayaasha Konyaspor jawaabaha Tram
Falcelintii tusaha taageeraha Konyaspor: Taageerayaasha Konyaspor waxay ka walwaleen in adeegga taraamka ee udhaxeeya Alaaddin-Otogar aan lagu guuleysan karin dhamaadka Sabtida sababa la xiriira dayactirka qadka taraamka. Sunday at 16: 00 ee garoonka ayaa waxaa Xuddunta Antalyaspor la Turkey [More ...]
Jid-gooyada qaybta wadada ayaa la dhigay isgoyska heerka: xaafada Adıyaman Gölbaşı ee Kurugeçit ee ku taalo heerka isgoysyada baabuurta loogu tala galay amniga qaybta qeybta ayaa dejisay baraago. Maareeyaha Arimaha Sayniska Gölbaşı [More ...]
Ogeysiiska Gaadiidka ee Degmada Kawnsalka Magaalada Konya
Ogaysiinta ka socota Dawlada Hoose Konyaroolada: Gaadiidka udhaxeeya Alaaddin-Otogar waxaa lagu bixin doonaa basaska sabtida iyo axadaha sababa la xiriira howlaha dayactirka wadada tareenka. Sharraxaadda ay bixisay Dawladda Hoose ee Magaalooyinka waa sidan soo socota: “Qorsheynta Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Konya [More ...]
Shirka weyn ee gaadiidka - Izmir
Shirka Gaadiidka Grand: 28 - 29 Abril 2016 - Kaya Izmir Thermal & Shirka. Dhammaan waaxaha ku xiran UDHB waxay ku kulmaan heerka ugu sarreeya ee İzmir. Ku saabsan UDHB, maamulayaasha shirkadaha, [More ...]
Qiimaha tikidhada IETT waa la kordhiyay: IETT (Istanbul Electric Tram iyo Howlgalka tunnel) waxay kordhisay khidmadaha rakaabka rakaabka ee magaalada. Iyadoo la raacayo, qiimaha tigidhada ee IETT 2,15'ten 2,30 TL. Tigidhada oo buuxa 2 [More ...]
Dhismaha dhisidda tareenka Baku-Tbilisi-Kars ayaa sanadkan la dhammeeyaa
Dhismaha waddada tareenka Baku-Tbilisi-Kars in la dhameystiro sannadkan: İsmayil Ambassador Turkey si Baku Alper Coskun ayaa sheegay in dhismaha waddada tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars (BTK) la dhamaystiri doono sanadkan sheegay. Coşkun wuxuu sheegay in daahitaanku ay sabab u yihiin sababo farsamo awgood. [More ...]